Mashiinka barafka jajaban ee biyaha - Shenzhen Herbin Ice Systems Co., Ltd.
Mashiinka barafka Flake
uumi baxa baraf dabacsan
Mashiinka barafka flake ee biyaha
Mashiinka barafka tuubada
Kuwa sameeya barafka ganacsiga
Mashiinka barafka lagu nadiifiyo
Xir makiinadaha barafka
Kubadaha wasakhda barafka
Qaababka barafka dheeman
Qaabab baraf ah Cube
Wasakh baraf ah
Bac baraf ah
Mashiinka barafka lagu duubo
Mashiinka barafka flake ee biyaha waxaa loo isticmaalaa doonta kaluumeysiga. Waxay ka samayn kartaa biyaha badda si toos ah jajab baraf leh.
Mashiinnada barafka ee biyaha badda loogu talagalay waxaa si gaar ah loogu talagalay in lagu sameeyo baraf doon kalluumeysi. Waxay 100% kahortagaan sunta biyaha badda ama dabaysha badda.
Naqshadeeyayaashoodu waa inay noqdaan kuwo caqli ku filan si ay uga dhigaan sida ugu macquulsan uguna macquulsan sidaa darteed waxay ku habboonaan kartaa booska kooban ee doomaha kalluumeysiga ah.
Baaxadda awoodda mashiinnada barafka ee biyaha badda waa 1T / maalin illaa 20T / maalin.
Awood wax soo saar baraf
1T / maalin badda mashiinka barafka flake
1 tan 24 saac
3T / maalin biyaha mashiinka barafka flake
3 tan 24 saac
5T / maalin biyaha mashiinka barafka flake
5 tan 24 saac
10T / maalin mashiinka barafka flake biyaha
10 tan 24 saac
20T / maalin biyaha mashiinka barafka flake
20 tan 24 saac
Waa kuwan faa'iidooyinka ugu waaweyn ee mashiinnada barafka duugga ah.
Si gaar ah loogu talagalay in loogu shaqeeyo xaaladda badda.
Kombaresarada waxaa lagu qalabeeyaa taangiyo gaar ah oo saliid ah, wareega saliida kombaresarada mashiinkuna waa mid siman marka ruxida laalaado xaalada doonta.
Qalabka biyaha qaboojiya ee biyaha qaboojiya waxaa laga sameeyaa tuubooyinka Alpaka, dhammaadka naxaasta, waana mid gebi ahaanba ka hortageysa biyaha biyaha. Biyo qabow oo bilaash ah ayaa loo isticmaali doonaa inay yihiin waxyaabaha ugu habboon ee looga saari karo kuleylka haweenta.
Dhamaadka naxaasta waxaa kuxiran bir bir ah oo aan xirayn 316 boolal.
Dhammaan meelaha ay taabtaan biyaha / barafka waxaa laga sameeyay bir bir ah 316. Nidaamka oo dhami wuxuu 100% ka hortag u yahay biyaha badda / dabaysha badda.
Danab dhaliyaha barafka waxaa lagu qalabeeyaa daab baraf ah iyo xoqista barafka.
Ballad-biyoodka ayaa goynaya lakabka barafka jajab, ka dibna xoqista barafka ayaa ka saareysa jaakadaha barafka dhaliyaha barafka.
Baalashka iyo xoqitaanka barafka ayaa wada shaqeeya isla markaana barafyada barafka laga saarayaa 100% dhammaantoodna waxay ku dhacayaan qolka barafka.
Dusha samaynta barafka Evaporator waxaa loogu talagalay khadadka Meridian iyo Parallel.
Khadadka ayaa hagaajiya hufnaanta samaynta barafka, waxayna aad uga caawinayaan goosashada barafka. Waxay u oggolaadaan xoqitaanka barafka inuu ka saaro dhammaan jajabyada barafka. Dhammaan jajabyada barafka ayaa si wanaagsan loo goostay.
Naqshad aad u caqli badan oo loogu talagalay biyo-baxa flake barafka dusha barafka sameeya. Waxaa loo idman yahay kooxdeena tan iyo 2009.
Waxsoosaarka mashiinada barafka ee biyaha badda 'waxqabadka markasta wuu ka fiican yahay mashiinada kale ee Shiinaha.
4. Tayo wanaagsan oo leh dammaanad dheer.
80% ka mid ah waxyaabaha ku jira mashiinadeyda barafka ayaa ah noocyo caan ah oo caalami ah. Kooxdayada wax soosaarka xirfadeed iyo khibrada leh waxay si buuxda uga faa'iidaystaan ​​qaybaha wanaagsan.
Taasi waxay kuu damaanad qaadeysaa mashiinno baraf jilicsan oo tayo wanaagsan leh oo leh waxqabadka ugu fiican.
Dammaanadda nidaamka qaboojiyaha waa 20 sano. Haddii nidaamka shaqada qaboojiyaha waxqabadkiisu noqdo mid aan caadi ahayn 20 sano gudahood, waxaan bixin doonnaa khasaarihii isticmaalaha.
Ma jiro gaas ka daadanaya tuubooyinka muddo 12 sano ah.
Ma jiraan qaybo qaboojiye ah oo burburaya 12 sano. Oo ay ku jiraan kombaresarada / kondenser / uumiyaha / balaadhinta filtarka ....
Dammaanad loogu talagalay qaybaha dhaqaaqa, sida mootada / bamka / saa'idka / qaybaha korantada, waa 2 sano.
5. Waqtiga dhalmada degdega ah.
Warshadaydu waa mid ka mid ah kuwa ugu waa weyn dalka Shiinaha oo ay ka buuxaan shaqaale khibrad leh.
Waxaan u baahan nahay wax ka badan 20 maalmood si aan u sameysano mashiinnada barafka dufanka leh oo ka yar 20T / maalin.
Waxaan u baahan nahay in ka badan 30 maalmood si aan u sameysano mashiinno baraf dabacsan inta u dhexeysa 20T / maalin illaa 40T / maalin.
Waqtiga wax soo saarka ee hal mashiin iyo dhowr mashiin waa isku mid.
Macaamilku ma sugi doono muddo dheer si uu u helo mashiinnada barafka dabacsan kadib bixinta.
Cinwaanka:Shiinaha, Bariga Aasiya